“Cristiano Ronaldo wuxuu sii wadi doonaa inuu dhaliyo goolasha xitaa markii uu 50-sano jirsado” – Mourinho – Gool FM
“Cristiano Ronaldo wuxuu sii wadi doonaa inuu dhaliyo goolasha xitaa markii uu 50-sano jirsado” – Mourinho
(Yurub) 12 Sebt 2019. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa amaanay weeraryahanka ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Cristiano Ronaldo, kaddib afarleydii uu ka dhaliyay xulka qaranka Lithuania, inta lagu gudi jiray ciyaartii isreeb-reebka Euro 2020.
Cristiano Ronaldo ayaa gaaray goolkiisii 93-aad ee xirfadiisa xulka qaranka Portugal, wuxuuna 17 gool oo kaliya u jiraa inuu jabiyo rikoorrkii cajiibka ahaa ee gooldhaliyaha reer Iran ee Ali Daei, kaasoo dhaliyay 109 gool oo heer caalami ah.
Mourinho ayaa sheegay inuusan la yaabaynin heerka Cristiano Ronaldo, sababtoo ah wuxuu ogaa hamigiisa shaqsiyadeed ee ah inuu xilli kasta guuleysto, wuxuu sidoo kale Jose tilmaamay in Ronaldo uu sii wadi doono inuu goolal dhaliyo kulamada saaxiibtinimo uu ciyaari doono xitaa marka uu kubadda cagta ka fariisto.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay dhawaan macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho wuxuuna yiri:
“Cristiano waa calaamad, waa shaqsi ka fikira kaliya inuu guuleysto isla markaana sameeya sida ugu fiican, marka xigta waxa uu sameynayo gabi ahaanba layaab iguma ahan”.
“Waxaan u maleynayaa marka uu Cristiano 50 jirsado, inuu joogi doono guriga, waxayna FIFA ku casuumi doontaa kulamada halyeeyada, wuu ciyaari doonaa wuxuuna dhalin doonaa goolal, sidaas ayuuna xaalka noqon doonaa”.
Si kastaba ha noqotee, xiriirka ka dhexeeya Jose Mourinho iyo Cristiano Ronaldo ayaa soo hagaagaya dhawaanahan, maadaama uu xumaa, sababa la xiriira inay isku dhaceen xilli ciyaareedkii saddexaad ee uu tababaraha reer Portugal la qaatay kooxda Real Madrid.
Maxay tahay sababta uu Arteta isaga diiday fursadii uu ku noqon lahaa badelka Arsène Wenger??